Izitulo ezi-3 * 40HQ zathunyelwa, ukuthengiswa kwesi sihlalo kuyaqhubeka nokunyuka, isizathu kukuba esi sihlalo sifumaneka ngemibala eyahlukeneyo, i-MOQ encinci, esemgangathweni kunye nexabiso elifanelekileyo, eqinile kunye neyomeleleyo, zombini ekhaya nangaphandle kuyasebenza kakhulu. Bathengisa kakuhle kwilizwe ngalinye, ngakumbi eNyakatho Melika, ...
Ukukhokela ekumgangatho ophezulu apha ekhaya
Iikhabhathi ezi-4 * ezingama-40HQ eziphezulu zezitulo zabantwana zathunyelwa, Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno eziphezulu zabathengi, umgangatho wawusoloko uphuculwe kwinkqubo yemveliso, iqela lethu lokuhlola umgangatho lijongile kwaye lilawula umgangatho kuyo yonke inkqubo. ...
Imeko entsha, umngeni omtsha
I-45th China (Guangzhou) yeFanitshala yefanitshala yamazwe aphesheya, ichaphazeleka sesi sifo, abathengi abaninzi bamanye amazwe abakwazanga ukuza kumboniso wokukhetha iimveliso ekujoliswe kuzo, lo mboniso wawusabanjwa ngokugqibeleleyo. Kwindimbane yeemveliso, iimveliso zethu zinenzuzo enkulu, uyilo lwalemihla ...
I-23th China Global Custom fanicha Expo, Iimveliso ezikumboniso zinokuchazwa njengendibano yeetalente ezininzi, xa kuthelekiswa neemveliso ezikwintsimi enye, isitayile kunye nomgangatho weemveliso zethu zikhuphisana kakhulu Umgangatho kunye nexabiso leemveliso zethu zisondele kakhulu. ijongwe ngabantu abaninzi ...